AKHRISO: Jaaliyadda Koonfur Galbeed ee Kenya oo walaac ka muujiyay doorashada ka dhaceysa Baydhabo | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA AKHRISO: Jaaliyadda Koonfur Galbeed ee Kenya oo walaac ka muujiyay doorashada ka...
AKHRISO: Jaaliyadda Koonfur Galbeed ee Kenya oo walaac ka muujiyay doorashada ka dhaceysa Baydhabo
Guddoomiyaha Jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya Cabdulbaari Sheikh Cabdisalaam oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in kan jaaliyad ahaan aad ula dhacsan yihiin waxqabadka Dowladda Federaalka Soomaaliya,islamarkaana taageero buuxdo u haayaan.
Wuxuu sheegay Guddoomiyaha in qurba joog ahaan niyada ku hayaan shaqada Dowladda dhexe ay u heyso Bulshada,isagoona carabka ku adkeeyay in muhiim ay tahay in shacabka Soomaaliyeed ee kU maqan dalka dibadiisa looga baahan yahay iney taageeraan Xukuumadda Soomaaliya.
Sidoo kale,Guddoomiyaha Jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya ayaa ku baaqay in sharci loo maro doorashada madaxweynaha Koonfur galbeed si buuq la’aan iyo deganaasho ugu dhacdo.
Kulamo looga hadlayay doorashada madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka kala dhacay magaalooyinka Nairobi iyo Baydhabo,sida uu guddoomiyaha sheegay,waxaana la isku afgartay in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo wada dhan dhan yahay ay uga qabsoomi lahayd magaalada Baydhabo ee xarunta Kumeel gaarka ah Maamulka Koonfur Galbeed.
Ugu danbeyntii,Jaaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Kenya ayaa ku ammaanay Dowladda Federaalka Soomaaliya sida wanaagsan ay u wajaheyso doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya.